Saturday July 09, 2016 - 19:40:54 in Maqaallo by Super Admin
Waxaynu nahay ummad musim ah, muslimka waxa lagu yaqaanaa wuxuu ku dedaalaa waxa dantu ugu jirto aaakhiro iyo adduunba labadaba, wuxuuna ka fogaadaa wixii dhibaato ugu jiro labada daaroodba (aakhiriyo adduunba), haddaad dhibaatada mar ku soo marta ee sababtaada ka dhalata mar kale ku noqoto caqli malihid,
Intaa markaan dhaafo, waxaan doonayaa in aan halkan talo uga soo jeeddiyo inta doorashada garoon keedada ku wada jirta, haday tahay
· Guddida doorashooyinka.
· Xisbiyada qaranka.
· Dadka doonaya in la doorto.
· Iyo dad weynahaba waxa laga doonayo.
1:- guddida doorashooyinka xlbaa idinka saran shaqadiina iyo saameyn teeda bulsho mid taban iyo mid toganba.
Waxaan uga jeedaa mar kasta oo doorashada lagelayo waxaa ka horeeya olole bille ah,
olole haas dadka in ladoorto doonayaa guryay kiratstaan qaab qabiil ah, gurya haas waxaa isugu yimaadda haween, rag iyo dhalinyaro waxaana lageeyaa baagag qaad ah, habeen iyo maalinba halaasaa lagu cayaaraa., waxaa ka soo baxa hablo garcada qaadkana barta, waxaa iyana kadhasha furiin badan oo ay reero dhisnaa ku burburaan.
Waxaa kale oo Iyana kasoo baxa hanti burbur aan laqiyaasikarin.
Markay sidaa tahay silooga baaq sado, waxaan soo jeedinayaa aniga iyo inta ila aragtida ahiba in ololaha layareeyo ama aan laga badin 15 cisho, hadaan wax ina khasbayaa jirin oo inagu xor unahay doorashadeenna, si ay xisbi kasta u soo marto shan jeer(5jeer).
Waxaa lahubaa in wax badan oo xumi inaga yaraanayaan xoola badanina ummada u baaq sanayaan.
2:- xisbiyada waxaan leenahay ciyaartu idinkay idiin dhacaysaa, doorashada idinkaa wax ku doonaya, doorasha shar keeda iyo khayr keedaba idinku qayb baa katihiin, haddaan la ololayn maalin keliya kolayba dadkeenu cid waa dooranayaan, waayo shaqo kaleba lamahayo dad keenana doorashadu waa u kaar jebin.
Waxaan idin leenahay xisbiyadaw guddida doorashoon ka u ban dhiga in ololaha aad loo yareeyo si sharka iyo khasaaruhuba inooga yaraado.
3:- kuwa doonaya in la doorto marka hore xilka hawdoonan inaad umada ku boobto, ee u doono inaad ku islaaxiso umada, ogowna illaahay waa ku waydiinayaa masuuliyadaa aad umada u qaaday, Daar xaaraan ah oo aad xoolo umadeed ka dhisatay, camal kaad ku hoos samaynaysana lagaama aqbalayo, ubadka kuugu dhashana waa ku kadeedayaan, lacagtaad urursataana dhkhtarbay kaaga baxaysaa sida hadaba haysata rag badan oo si xun wax u urursaday.
4:- Dadweynaha wax dooranayaa mid way ku khaldanahay, ninka aynu dooranayno ee qabiilkeena ahi markuu daarta iibinayo, ee gaadhiga iibinayo, ee guryaha qaadka inoo kiraynayo inuu meesha helo iyo inuu waayo ayuu ka dhexeeyaa, haduu waayo inuu waasho iyo inuu intuu noolyahayba ciilku noolaado ayuu ka dhexeeyaa.
Haddii kalena isagoo caydh ah ayuu kursiga gaadhayaa oo kumanan doolar lagu leeyahay markaa wakhtigu wuxuu kaga dhamaanayaa intuu daynta bixinayo iyo intuu wax urursanayo , markaa ma aan marka hore bilaaash ku saarno kusiga ama mark danbe yeynaan marka qaad laga waayo yeynaan odhan waa ku khasaarnay .
Qalinkii: Nuur Axmed Oday